Sidee lagu soo ceelin karra doorkii Sugaanta? (Daawo) – Radio Daljir
Sidee lagu soo ceelin karra doorkii Sugaanta? (Daawo)
Noofember 21, 2018 2:21 g 0
Suugaantu ma dhamaan mana yaraan curinteedana wali Soomaalidu waxay ku tahay qani lkn hal abuuro badan ayaa sheega in doorkii suugaanta oo waayo hore ahaa war is gaarsiinta bulshada uu meesha ka baxay sidaasna dhegaysigeedu ku yaraaday.
Noocyada kala duwan ee Suugaanta iyo hal abuurka ee yaraaday ama ay fara kutiris tahay in qof ka yar 20 sano curiyo waxaa kamid ah Gabayga, hase ahaatee Siciid Cabdilaahi Aadan waa hal abuur da’diisu ka yartahay 20 sano curiyeyna gabayo badan. maansooyin iyo gabayo kala duwan oo Daljir ka duubtay ayaan mid kamid ah Dhegaystayaasha Daljir iyo daawadayaasheena baraha bulshada maata usoo xulay.
Waa gabay kamid ah Silsilad la magac baxday Garnayl Caashaq oo 4 dhalinyaro ahi gabayo isku dhaafsadeen waa tix Jacayl ka hadlaysa lkn sarbeebna noqon karta isagoo ka hadlayey dhibka uu kala kulmay inanta uu raadinayo ayuu yiri.
1. Telephone way xidhatayoo Goysay hadalkiiye
2. Gaalkacyo sii dhaaftay iyo gudo Nugaaleede
3. Guriceel masoo dhaafto iyo Goonyahaa Xamare.
Ma is leedahay waa lasoo celin karaa doorkii Suugaantu bulshada Soomaalida ku lahayd? nala wadaag aragtidaada
Hoos kadaawo Gabya Darwiish